Burma Partnership » U.S. Government Announces New Increase in Support to World Food Program (WFP) to Help Flood Victims
By United Nations World Food Program • August 17, 2015
Through new and existing activities, the U.S. government will provide over $4.5 million in flood relief and recovery assistance to over 250,000 people impacted by the disaster.
USAID-supported food assistance is part ofabroader effort to address the humanitarian needs of those affected by the floods in partnership with the Government of Myanmar, UN agencies, and local and international non-governmental organizations.
“USAID has been fully engaged in supporting emergency assistance efforts in Myanmar during this critical time,” said U.S. Ambassador Derek Mitchell. “We are working closely with affected communities to assess the situation and to ensure that assistance is reaching those who need it most. The U.S. Embassy will continue to closely follow the situation and work with our partners to determine how we can best support recovery efforts in weeks to come.”
USAID partners are also realigning their activities to provide immediate support and looking at ways to assist in recovery. This includes relief assistance to the flood and landslide affected areas of Sagaing, Magway, Rakhine, Chin and other affected areas. USAID partners are distributing household items and hygiene supplies, and providing access to clean drinking water and sanitation.
While we work with local partners to assist with the relief efforts, we recognize the tremendous work being done by people across this country to help victims of the heavy rains and flooding. We continue to send our heartfelt thoughts and prayers to all affected communities.
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ကူညီရန် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်သို့ အမေရိကန်အစိုးရ၏အကူအညီသစ် တိုးမြှင့်ကြောင်းကြေငြာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမိုးသည်းထန်ခြင်းနှင့်ရေကြီးခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရသောပြည်သူများအတွက် အကူအညီပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် United Nations World Food Program သို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃သန်းပေးအပ်လှူဒါန်းရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ၏ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စားနပ်ရိက္ခာရုံး USAID Office of Food for Peace က ယနေ့သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းမှဝယ်ယူမည့် ဆန် မက်ထရစ်တန် ချိန် ၃,၃၀၀ ကျော်၊ ပဲ နှင့်ဆားအပါအဝင်ဒေသတွင်းမှဝယ်ယူမည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီများကိုနိုင်ငံတစ်ဝန်းတိုင်းဒေသကြီးများနှင့်ပြည်နယ်များရှိဒုက္ခရောက်နေသည့်ပြည်သူများထံသို့ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သဘာဝဘေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်ကြရသည့် ပြည်သူ ၂၅၀,၀၀၀ ကျော်၏ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၅ သန်း ကျော် ကိုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့်အစီအစဉ်များအပြင်အစီအစဉ်အသစ်များမှတစ်ဆင့် အမေရိကန်အစိုးရ က အကူအညီပေးသွားပါမည်။
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် လိုအပ်နေသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကိုကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အားထုတ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် USAID က မြန်မာအစိုးရ၊ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများ၊ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍စားရေရိက္ခာပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာအခက်အခဲကျရောက်နေတဲ့ကာလအတွင်းအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်အောင် USAID အနေဖြင့်အပြည့်အဝအားထုတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အများဆုံးလိုအပ်နေသူများဆီအကူအညီတွေသေသေချာချာရောက်ရှိရေးနဲ့အခြေနေတွေကိုတွက်ချက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘေးဒဏ်သင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။လာမယ့်သီတင်းပတ်များအတွင်းဆောင်ရွက်ရတော့မယ့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရာမှာအကောင်းဆုံးအကူအညီတွေဘယ်လိုပေးလို့ ရနိုင်မလဲဆိုတာအတွက်အမေရိကန်သံရုံးကနေပြီးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အနီးကပ်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” ဟု အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရက်မစ်ချယ် ကပြောပါသည်။
USAID၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တိုက်ရိုက်အထောက်အပံ့တွေအမြန်ဆုံးပံ့ပိုး ပေး နိုင်ရန်သူတို့ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်း များရှာဖွေနေပါပြီ။ သည်အစီအစဉ်များထဲမှာရေကြီးမြေပြိုမှုဘေးများကြုံတွေ့ခဲ့ ကြရသည့်စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ ရခိုင်နှင့် ချင်း အပါအဝင် တခြားဒေသ များလည်းပါဝင်ပါသည်။ မိသားစုသုံးပစ္စည်းများ၊ တစ်ကိုယ်ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ၊သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေနှင့်မိလ္လာစနစ်များရရှိရေးအတွက် USAID ၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ဖြန့်ဝေပေးနေပါသည်။
ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကပြည်တွင်းမိတ်ဖက်အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေချိန်မှာနိုင်ငံတစ်ဝန်းပြည်သူများကလည်းရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်အင်တိုက်အားတိုက်ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုအပ်ပါသည်။ ဒုက္ခရောက်ကြရ သောပြည်သူများအတွက်လည်း လွန်စွာမှစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးသူတို့အတွက်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလျက်ရှိပါသည်။
Tags: ASEAN, Displacement, Flood Victims, Humanitarian Aid, United Nations World Food Program, USAID